February 2017 - Ibsaa Jireenyaa
Shakkii jechuun faalla dhugaa yaadu. ‘Kuni soba moo dhugaadha? Ni jira moo hin jiru? Gochii kuni adeemsifamee moo hin adeemsifamne? Ta’a moo hin ta’u?’jedhanii yaadu fi keessi namaa tasgabbii dhabuudha. Namni shakkii qabu takkaa gara funduraa hin deemu, takkaa gara duubaa hin deebi’u takkaa immoo achi hin dhaabbatu. Oli gadii raata’a. Dhama’iinsi fi dukkanni isa haguuga. Shakkiin hundee hin qabne baay’ee badaa fi miidhaa guddaa kan geessudha. Sababa shakkitiin maatiin bittinaa’e. Haadha warraa isaa wantuma argeen shakkuun jireenya ofii daaraa kan itti afu meeqatu jira. shakkii bakka lamatti qoonne ilaalu dandeenya. Read more
Niitin ykn dhiirsi nyakkistu/nyakkisaa yoo ta’e ibiddi manatti qabate. Halkanii guyyaa nageenyi hin jiru. Yoomi laata namticha ykn namtitti tana jalaa kan bahu jechuun yaaddon gara hundan si marsuu danda’a. Tarii ati dargaggeessa hin fuune ykn shamara hin heerumne ta’uu dandeessa. Akka carraa ta’ee nama nyakkisuun walitti dhufuu dandeessa. Read more
February 4, 2017 Sammubani One comment
Kijiba ykn soba jechuun faalla wanta hojjatanii, dhagahanii fi dubbatanii dubbachuudha. Kijibni dhugaa jiru dhoksanii faallaa isaa dubbachuu yookiin immoo soba dhugaa fakkeessanii dubbachuudha. Kijibni amaloota fafee fi jibbamoo keessa isa tokkoodha. Namni kijibu akka nama fooliin badaan irraa xiraa’uti (ajaa’uti). Namni hunduu isa xireefata, ni jibba. Hawaasa keessatti amanamummaan isa irraa mulqamuun nama kijibaan beekkamu ta’a. Kijibni wanta dhowwamaa fi jibbamaadha. Garuu yeroo ammaa jaallatamaa fi bartee godhatamee jira. Namni hunduu ni kijaba jechuun nutis akka isaanii kijibuun warroota salphatan keessaa ta’uu hin qabnu. Read more